Apple ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့် Magsafe အခြေခံ Nomad Base One ငါ mac ကပါ။
Apple ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့် Magsafe အခြေခံ Nomad Base One
Jordi Gimenez | 12/04/2022 10:08 | ပစ္စည်းများ
Nomad နှင့် Apple စက်ပစ္စည်းများအတွက် ထုတ်လုပ်သည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်းပြောသောအခါ၊ ၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင် ပါရှိသော ထုတ်ကုန်အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးတို့ကို သိရှိနားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ loma ထုတ်ကုန်များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ မြင်တွေ့နေရပြီး အချို့သောကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့သည် Apple မှထုတ်လုပ်သော အချို့သောပစ္စည်းများထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည့်အထိ ၎င်းတို့သည် ပို၍ပို၍ အံ့မခန်းပုံပေါက်နေပုံရသည်။ Cupertino ကုမ္ပဏီသည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းအတွက် တတိယပါတီများအပေါ်တွင်မူတည်နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဤအခြေအနေတွင် Nomad သည် အသစ်ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးရှိသော ထုတ်ကုန်များကို ဆက်လက်ကမ်းလှမ်းနေပါသည်။ Nomad မှ Base One
1 Nomad Base One၊ သင့် iPhone အတွက် MagSafe အားသွင်းပါ။
2 Nomad Base One အားသွင်းစခန်း၏ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ
2.1 အားသွင်းပုံး၏ အကြောင်းအရာများ
3 Nomad Premium Charging Dock
Nomad Base One၊ သင့် iPhone အတွက် MagSafe အားသွင်းပါ။
ငါတို့အရင်ကပြောလိမ့်မယ်။ ယနေ့ဈေးကွက်တွင် ပရီမီယံအားသွင်းအပေါက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ MagSafe ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထို့အပြင် ဤ Nomad အားသွင်းစခန်းမှ ပေးဆောင်သည့် အရည်အသွေးသည် နည်းလမ်းတိုင်းတွင် အမှန်တကယ် အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone အတွက် ရိုးရှင်းသော အားသွင်းအခြေခံကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါသည်၊ သို့သော် ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အပိုင်းအတွင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကို တွေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့မှာ အမှန်တကယ် မျှတသောအချောထည်များဖြင့် တွေ့ရသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည်မှာ ဤကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်၌ သင်မြင်နေရသည့်အတိုင်းပင် တရားဝင် Nomad က်ဘ်ဆိုက်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးသော အချောထည်နှင့် ပစ္စည်းများပါသည့် အားသွင်းစခန်းများထဲမှ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤ Base One အားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းအသစ်သည် iPhone အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားပြီး ဒီဇိုင်းပါရှိပါသည်။ အစိုင်အခဲသတ္တုနှင့်ဖန်ကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
Nomad Base One အားသွင်းစခန်း၏ အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကို စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် တင်ထားခြင်းဖြင့် အားသွင်းနိုင်စေရန် လုံးဝပြားသောကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လက်တွေ့ကျပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ၊ မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီက ဒီအားသွင်းကိရိယာပါရှိပါတယ်။ MFi Magsafe ထောက်ခံချက်ထို့ကြောင့် ဤအမျိုးအစားနှင့် လိုက်ဖက်သော iPhone မော်ဒယ်များနှင့် မည်သည့်ပြဿနာမှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အပြည့်အဝ MFi လက်မှတ်ရရှိထားသည့်အပြင်၊ အားသွင်းအခြေခံသည် သင့် iPhone ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့် 30W အမြန်အားသွင်းကိရိယာကိုအသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးပါသည်။ ဤအားသွင်းကိရိယာသည် အားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းတွင်မပါဝင်ပါ၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် USB C အပေါက်များပါရှိသော အရှည်2မီတာအားသွင်းကြိုးသည် နံရံချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် အောက်ခြေကိုယ်တိုင်အားသွင်းနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဒီကေဘယ်ကြိုးက အောက်ခြေရဲ့ အတိုင်း အရောင်ပြောင်းတယ်၊ သင်တွေ့နိုင်တယ်။ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် မော်ဒယ်တစ်ခုစီပေါ် မူတည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone အား အားသွင်းရန်အတွက် 15W နံရံပလပ်ပေါက်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ခြေမှာ စလစ်မကပ်တဲ့ ရော်ဘာအပိုင်းကို စားပွဲမုဒ်မှာ ရှိနေစေတဲ့အတွက် ရွှေ့ရခက်မယ်လို့ ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်၊ ၎င်း၏အလေးချိန် 515 ဂရမ်. ၎င်းသည် ၎င်း၏သေတ္တာအတွင်း အခြေခံကို ယူလိုက်သည်နှင့် သိသိသာသာ မြင့်မားသောအလေးချိန်ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင် အခြေခံ၏ ရိုးရှင်းမှုသည် အကွက်ထဲတွင် ထည့်ထားသည့်အရာနှင့် အချိုးကျသည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့်အရာဖြစ်သည်။ အားသွင်းအောက်ခံတစ်ခုနှင့် USB C ကြိုးပါသည့်သေတ္တာ အောက်ခံအရောင်ပေါ်မူတည်၍ အဖြူ သို့မဟုတ် အနက်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ခြေတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုထားရန်နှင့် အားသွင်းရန် ထိပ်တွင် သိသိသာသာ နေရာလွတ်ရှိသည်။
ပါဝါအဒက်တာသီးခြားစီဝယ်ရမယ်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ပုံများတွင် USB C အပေါက်ပါသော 30 W တရားဝင် Nomad မော်ဒယ်ကို ပြသသည်၊ ဤ adapter သည် အမေရိကန်ဖြစ်သောကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂရှိ ပလပ်များနှင့် နံရံသို့ချိတ်ဆက်ရန် အခြား adapter လိုအပ်ပါသည်။
Apple ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်ထုတ်လုပ်သူအများအပြားကဲ့သို့ပင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Macs ကဲ့သို့သောယခင်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ထားပြီးသားကဲ့သို့ပြားချပ်ချပ်များမှလွဲ၍၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းအားလုံးနီးပါးတွင်အားသွင်းကိရိယာများကိုထည့်သွင်းခြင်းမရှိပါ။ Base Station Hub အခြားသူတွေအကြား
Nomad Premium Charging Dock
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည်ပစ္စည်းများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးအားသွင်းအခြေခံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သံသယမရှိပါ။ ဤအားသွင်းအခြေစိုက်စခန်း အမျိုးအစား၏ မကောင်းသောအချက်မှာ စျေးနှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ဈေးကွက်တွင်တွေ့ရသော အခြားအားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယုတ္တိနည်းအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ သေချာသည်မှာ ဤအားသွင်းအခြေစိုက်စခန်း၏ ပရီမီယံအရည်အသွေးသည် ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီပြီး ယူရို 100 ကျော်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသ€ 103 Magnificos ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်။
Nomad ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် သင့်အား အကြံပြုလိုသည်မှာ သင်္ဘောခနှင့် အခွန်အခများသည် စျေးနှုန်းသိသိသာသာ တိုးလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်းထက် ၎င်းသည် ပိုကောင်းသောကြောင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Base One Nomad
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 12 ဧပြီလ 2022
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 12 ဧပြီလ 2022
ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းများနှင့် အရောင်နှစ်မျိုး
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကို ရယူပါ။
အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးကဲ့သို့ နံရံအားသွင်းကိရိယာ မပါဝင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » Apple ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့် Magsafe အခြေခံ Nomad Base One
Mac တင်ပို့ရောင်းချမှုသည် ကျဆင်းနေသော စျေးကွက်တွင် ဆက်လက်ကြီးထွားနေပါသည်။
Apple Studio Display Firmware တွင် Apple ကုဒ်အပေါ်အခြေခံထားသော Mac mini အသစ်